ကယ်တော့ လိမ်ဆင်တခု ထပ်လုပ်လာတာလည်း အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လောင်စာဆီဈေးတွေ မြှင့်တက်အပြီး ပြဿနာတက်လာတဲ့အခါ တယောက်ယောက်ကို ဓါးစာခံရှာပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပဲ အကြံပြုခဲ့သလိုမျိုး စာရွက်စာတမ်းတချို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းမီဒီယာတွေ ကြားထဲမှာ လက်သိပ်ထိုးဖြန့်ဝေခဲ့ပါ တယ်။ တကယ်တော့ “မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်” ဆိုတာ အစိုးရနဲ့ မသက် ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုလိုမျိုး ပြောထားပေမယ့်၊ တကယ်တော့ ဒီနေရာမှာ ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်ပါမစ်ခွဲဝေတာတွေ လုပ်ကြပြီး၊ သူတို့က အစိုးရအပေါ် ထိထိရောက်ရောက် အကြံပေး သြဇာလွှမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားလည်း မရှိပါဘူး။
အချို့သံတမန်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတောင် ဘာမှဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောကြပါ တယ်။ အခုလည်း ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်၊ ဘယ်သူဆုံးဖြတ်လာမှန်း မသိရတဲ့ လောင်စာဆီဈေးမြှင့်ဖို့ကိစ္စကို စီးပွားရေးပညာရှင် တွေနဲ့ UMFCCI လို့ခေါ်တဲ့ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းချုပ်အပေါ် ပုံချလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလိမ်ပေါ်သွားပါပြီ။
အောက်မှာ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းချုပ်က ဖြန့်တယ်ဆိုတဲ့ ပြန့်နေတဲ့ စာကို ပြန်ရိုက်ပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ မဇ္ဈိမ သတင်း မြန်မာစာမျက်နှာမှာလည်း တင်ထားတာဖတ်ရပါတယ်။
မူရင်းကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့်က တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပေးစာတွေကို သတင်းမီဒီယာဌာနတွေကို ပေးဖို့ ခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြင့်က စီးပွားရေးဘာသာရပ်နဲ့ Ph. D ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (ဘာကလေ) က ယူလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးပညာဌာနမှာ ဆရာအဖြစ်၊ ဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးဌာနခွဲမှာ တာဝန်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ စီးပွား၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာ အကြီးတန်းပညာရှင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းပြီး အနားယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မူရင်းစာကို ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာစာဖတ်ပုရိသတ်တွေအတွက် ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်
အမှတ် ၅၀၄/၅၀၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၂၄၆၄၉၅/ ၂၄၃ ၁၅၁/၃၁၁၂၈၅။ ဖက်စ် ၉၅-၁-၂၄၀၁၇၇
စာအမှတ်။ က/၃/၇ (၁၂) ၀၅-၀၇ (၅၀၇၆)
ရက်စွဲ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၏ စာတမ်းများဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။
၁။ ဤကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သည် ရည်ရွယ်ချက် ၁၁ ချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် ၈ ရပ်တို့ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးဆောင် ရွက်လျှက် ရှိရာတွင် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံညာဏ်များပေးနိုင်ရန် ဤအသင်းချုပ်တွင် UMFCCI Economic Studies and Research Institute (ESRI) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးလျှင် သုတေသနစာတမ်းများ ကို ရေးသားပြုစု၍ အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြလျှက် ရှိပါသည်။
၂။ အဆိုပါသုတေသန စာတမ်းများကို သုတေသနလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရေး၊ အရည်အသွေး မြင့် မားရေး၊ အချက်အလက်များ ပိုမိုမှန်ကန်တိကျမှုရှိစေရေး လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုရှိစေရေးတို့ အတွက် ကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းအကြံ ပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ ၀ါရင့်ပညာရှင်ကြီးများ ပါဝင်သော စာတမ်းများဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ (ESRI Advisory Group) ကို ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၏ စာတမ်းများဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။
(က) ဦးခင်မောင်ရီ ဒုတိယ၀န်ကြီး (ငြိမ်း)
(ခ) ဒေါက်တာမန်းသက်စံ ဒုတိယ၀န်ကြီး (ငြိမ်း)
(ဂ) ဒေါက်တာကျော်ထင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း)
(ဃ) ဦးလှမောင် မြန်မာသံအမတ်ကြီး (ငြိမ်း)
(င) ဒေါက်တာမောင်မြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း) (UNCTAD)
(စ) ဦးမြတ်သိန်း ပါမောက္ခချုပ် (ငြိမ်း) ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
(ဆ) ဦးမော်သန်း ပါမောက္ခချုပ် (ငြိမ်း) ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
(ဇ) ဒေါက်တာကံဇော် ပါမောက္ခချုပ်၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
(ဈ) ဒေါက်တာတင်စိုး ပါမောက္ခ၊ စီးပွားရေးပညာဌာန၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်
(ည) ဒေါက်တာရီရီမြင့် ပါမောက္ခ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
၄။ UMFCCI စာတမ်းများဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) UMFCCI မှ ရေးသားပြုစုသော စာတမ်းများ၏အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် အကြံပြုပေးရန်။
(ခ) UMFCCI မှ ရေးသားပြုစုသော စာတမ်းများရေးသားပြုစုသည့်အခါတွင် သင့်လျှော်သော လမ်းညွှန်မှု၊ အကြံပေးမှု၊ ကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်။
(ဂ) UMFCCI မှ ရေးသားပြုစုသော စာတမ်းများအပေါ် သုတေသနလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရေး၊ အရည်အသွေး မြင့်မားရေး၊ အချက်အလက်များ ပိုမိုတိကျမှန်ကန်ရေးနှင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အသုံးဝင်မှုရှိစေရေး တို့အတွက် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်။
(ဃ) UMFCCI မှ ရေးသားပြုစုသော စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံ စာတမ်းရှင် များက တွေ့ဆုံရှင်းလင်းတင်ပြရသည့်အခါများတွင် လိုအပ်ပါက ပါဝင်ဆွေးနွေး ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်။
၅။ UMFCCI မှ ရေးသားပြုစုသော စာတမ်းများအပေါ် အကြံပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အလေးထား၍ သင့်လျော်သလို ထည့်သွင်းဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ဖော်ပြချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နောက် ဆက်တွဲပြဿနာများကို အကြံပြုပုဂ္ဂိုလ်များတွင် တာဝန်မရှိစေရဘဲ UMFCCI က တာဝန်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ UMFCCI ESRI Advisory Group အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် ညာဏ်ပူဇော်ခ (Honorarium) အဖြစ် အခါအားလျှော်စွာ ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ။
(၂) ကုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ
(၃) ESRI (1)/ ESRI (2)/ ESRI (3)
(၄) ဌာနအားလုံး၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်။
နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်သည့်ကိစ္စရပ်အပေါ် အကြံပြုတင်ပြချက်
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏အကျိုးကို သယ်ပိုးလုပ်ဆောင်နေသည့် ၀န်ထမ်းများအား လက်ရှိလူနေမှုစရိတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ရရှိထိုက်သော လစာငွေများ တိုးမြှင့်သည့်ကိစ္စသည် လွန်စွာကောင်းမွန်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါ သည်။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ရရှိလာသောဝင်ငွေများမှ လိုအပ်ချက်များကို သုံးစွဲမှုပြုခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ စားသုံးမှုတိုးမြှင့်စေပြီး တိုင်းပြည်၏၀င်ငွေ တိုးတက်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ လစာတိုးမြှင့်မှုသည် တိုင်း ပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဓနခွဲဝေမှု (Wealth Distribution) ပြုလုပ်ရာ ရောက်စေပါသည်။ ထို့အတွက် နိုင်ငံတော် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပါသောကြောင့် ကြိုဆိုအပ်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ယခုတိုးမြှင့်လိုက်သော လစာများသည် တစ်ဦးခြင်းပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၃၀၀၀၀) ကျပ်ခန့် တိုးမြှင့်သည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ၀န်ထမ်းဦးရေခန့်မှန်း (၁၅) သိန်းခန့်ရှိသည် ဖြစ်သောကြောင့် လစဉ်လိုအပ်သောငွေပမာဏမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၄၅, ၀၀၀) ခန့် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် လိုအပ်ငွေပမာဏ ကျပ်သန်းပေါင်း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန့် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင်ကြေငြာချက်အရ ယမန်နှစ် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဘဏ္ဍာရေး လိုငွေပြနေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယခုနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများ၏ တစ်နှစ်စာလစာအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သော ငွေပမာဏ ကျပ်သန်းပေါင်း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန့် အား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာမှ ကျခံသုံးစွဲမည်ကို အများပြည်သူများက စိုးရိမ်နေကြပါသည်။ အကယ်၍ ထိုငွေပမာဏကို နိုင်ငံတော်မှ တိုးတက်ရရှိအောင် မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါလျှင် ငွေဖောင်းပွမှုဖြစ်ကာ ကုန်ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်သွားနိုင်ပါသည်။
ထိုအခါ နိုင်ငံတော်၏ စေတနာအလျှောက်လုပ်ဆောင်ထားသော ၀န်ထမ်းများ၏ လစာတိုးမြှင့်သည့်ကိစ္စရပ်မှာ အရာ မရောက်ပဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်၏ ၀င်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိစေရန် အောက်ပါအတိုင်းအကြံပြုတင်ပြ အပ်ပါသည်။
၁။ နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိလောင်စာဈေးနှုန်းသည် တစ်ဂါလံလျှင် ကျပ် (၁၅၀၀) ဖြင့် ရောင်းချနေသည်မှာ နိုင်ငံတကာ ပေါက်ဈေးဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုပါက လွန်စွာသက်သာနေပါသဖြင့် တစ်ဂါလံလျှင် အနိမ့်ဆုံးကျပ် (၃၀၀၀) ဖြင့် ရောင်းချသင့်ပါသည်။ ထိုအခါ တစ်ဂါလံပေါ်တွင် တိုးမြှင့်လိုက်သော (၁၅၀၀) ကျပ်သည် ပြည်တွင်းတွင် တစ်နှစ်သုံးစွဲ သော ဆီဂါလံအပေါ်တွင် ကျပ်သန်းပေါင်း (၅၄၀, ၀၀၀) ခန့် နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် စီးဝင်စေမည် ဖြစ်သည်။
၂။ နိုင်ငံတော်တွင် ဖြန့်ဖြူးပေးနေသော လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ပမာဏ ကျသင့်ငွေမှာလည်း ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းအောက် အလွန် နိမ့်ကျနေပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်၏တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀. ၀၈) မြန်မာငွေ (၈၀) ကျပ်ခန့် မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀. ၁၃) မြန်မာငွေ (၁၃၀) ကျပ်အထိ ရှိနေပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်းများ ကို (၁၀၀) ကျပ်ခန့်အထိ တိုးမြှင့်သင့်ပါသည်။
ထိုအခါ တစ်နှစ်သုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (၂၇၀၀. ၆၈ million kwh) အပေါ်တွင် တစ်ယူနစ်လျှင် (၇၅) ကျပ်ခန့် အထိ တိုးမြှင့်ရရှိပါက မြန်မာငွေသန်း (၂၀၂၅၅) ကျပ်ခန့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အထက်ဖော်ပြပါ (၂) ချက်ကို နိုင်ငံတော်မှ ချက်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်ပြုလုပ်၍ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ တိုးမြှင့်ရန် လုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အခွန်ကောက်ခံသည့်ကိစ္စအား မျှမျှ တတ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် လက်ရှိအခွန်ထမ်းများအပေါ် ဖိစီးမှု မရှိစေပဲ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အခွန်ထမ်းဆောင်မည့်သူများအား မျှမျှတတ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အခွန်ကောက်ခံစေခြင်းမျိုးဖြစ် ပါသည်။ ယခုဖော်ပြပါ နည်းလမ်းသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါသဖြင့် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ပြုလုပ်သင့်ပါ သည်။
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများအနေဖြင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအား တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည့်အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ အမှန်က တွင်ကျယ်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေရာတွင် Controlling Services ဈေးကွက်၊ (Transportation Services) ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးအောက် လောင်စာဆီတစ်ဂါလံလျှင် (၃၀၀၀) ကျပ်အထက်ဖြင့် တွက်ချက်လုပ် ဆောင်နေပါသဖြင့် လက်ရှိကုန်ဈေးနှုန်းအား ထိခိုက်နစ်နာနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုများအား ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါ လောင်စာဆီတစ်ဂါလံလျှင် (၃၀၀၀) ကျပ်သို့ မတိုးမြှင့်ပဲ ငွေဖောင်းပွမှု ဖြစ်ခဲ့ပါက မြန်မာ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ တစ်ဂါလံလျှင် (၃၇၅၀) ကျပ်၊ (အမေ ရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၀၀ ယူဆလျှင်) အထိ ဈေးမြင့်တက်သွားနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ တစ်ဂါလံ လျှင် (၃၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် တိုးမြှင့်ရောင်းချပါက မြန်မာကျပ်ငွေ ကျစ်လစ်သွားပြီးလျှင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာ ကျပ်ငွေ (၁၀၅၀) အောက် ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းလာသဖြင့် လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်လာဈေးနှုန်း ကျဆင်းမှုကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများလည်း ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ နိုင်ငံတော်၏ စေတနာအလျှောက် ၀န်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်သည့်ကိစ္စ အကျိုးထိရောက်မှု ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်ကို တင်ပြအကြံပြုအပ်ပါ သည်။
.... .... .... ဖတ်မရပါ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆီတစ်ဂါလံနှုန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂. ၆)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆီတစ်ဂါလံနှုန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂. ၅၆)
တစ်ရက်လျှင် သုံးစွဲသော ဆီဂါလံ ၁ သန်း (ခန့်မှန်း) ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။
Posted by ရွက်မွန် at 3:27 PM